Usafambisa doro (yakagadzirwa) - NYE Kuverengera kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #84 Category: DJ Drops
Usafambisa doro (yakagadzirwa)
Vadzidzisi uye vashandi tauya ku2018! Ita ruzha! (yakagadzirwa)
Ladies and Gentleman, panzvimbo yevashandi vose. Ndapota usafambisa doro, yeuka ganda
Hatingagoni here tose tifambidzane? (yakagadzirwa)
Kana imwe yeZvakasarudzo Zvesva Idzva ndeyokunwa doro rakawanda ... mumwe munhu achidanidzira! (yakagadzirwa)
Madzimai uye nyanzvi, unogona kubata mbongoro chero ipi zvayo kwemashure e30 anotevera usingapindi mumatambudziko. (yakagadzirwa)
Uye zvino ... iyo inoridza chikamu chikuru cheusiku chinotanga. (yakagadzirwa)
Wow. Iwe uri mudikanwa chaizvo! (yakagadzirwa)
Mutambo DJ Audio Drops
Kusvikira ku 30 Seconds ye script yakagadzirwa ne audio and effects! Yese inzwi inoshandiswa nemwi dj zita, kambani kana kirabhu mukati memadonhwe. Iwe une chisarudzo chako chemaMukadzi kana maManzwi. American, British or Spanish. Yakakwana yekutengesa mavhanganidzi nemakwikwi eshe! Wedding mobile djs shandisa izvi kuti uwedzere humwe hukomba kumagigs avo nekusimbisa Mukadzi uye Grooms vanyore mukati mezwi. Inoita kukosha kukuru!